Microsoft tena toetrany Book Review - News Fitsipika
Ambonin'ny Book dia iray amin'ireo tsara indrindra Windows 10 solosaina. Fa ny antoko silaka dia mihoatra noho ny fampandriana adrisa fotsiny izany. Rehefa tafasaraka tanteraka amin'ny ny vatana ny lamba manao ho mendrika, raha naharitra ela, takelaka izany faran'izay Slim sy mora ny mihazona.
Laptop aloha, takelaka faharoa, izany no tsara indrindra mitambatra ny 2-in-1 milina rehetra ny herin'ny feno voaporitra PC ho 7.7mm ny takelaka
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Microsoft tena toetrany Book famerenana: ny tsara indrindra solosaina findainy Windows, amin'ny detachable efijery” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com ny alakamisy 25 Febroary 2016 07.00 UTC
Boky ambonin'ny no voalohany ny vaovao tady solosaina avy amin'ny Microsoft amin'ny heviny, ny lamba fanakonana tonga eny.
Microsoft ny tena toetrany nanomboka Pro tsipika eny clunky: lehibe, fa mavesatra sy orinasa amin'ny famolavolana. Ny tena toetrany farany Pro 4 dia thinner ary mahavita kokoa, fa tsara tarehy be toy izany koa: Windows 10 takelaka amin'ny removable fitendry.
Fa ny tena toetrany Boky biby dia hafa tanteraka: ny laptop aloha, takelaka faharoa. Izany toa toy ny hafahafa hafa, fa tena mahatonga ny fahasamihafana raha toa ny fitendry no voalohany indrindra mpamily ny solosaina.
Laptop aloha, takelaka faharoa
Ny lamba fanakonana detaches avy amin'ny solosaina findainy fototra ho lasa takelaka. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Raha niresaka ny fitendry, dia tsy hoe ho moana fanampin-javatra. Izany mihazona lehibe kokoa bateria, ny karatra SD slot, roa USB 3.0 port, ny Mini DisplayPort sy ny andriamby mamaly ny faladiany. Fa mety koa ny manana discrete sary karatra ao izany, arakaraka ny modely, manome ny tena toetrany Book grunt bebe kokoa raha ilaina.
Ary ny sisa amin'ny fiasan 'ny solosaina dia hita ao amin'ny efijery, izay mahatonga azy io izay mbola miavaka kokoa fa tena manify dia.
Ny lamba sy ny fitendry dia mifandray amin'ny raitra Fulcrum miankina izay mikodiadia avy fotsiny fa tsy pivoting. Izany dia nanitatra ny halavan'ny-pototry ny fitendry ho tsara kokoa mandanjalanja ny efijery, nefa tsy mba hametraka lanja.
Toa hafahafa, efa ho mangatsiatsiaka, ary amin'ny fampiharana miasa tsara. Tsy Jery mitongilana tena hatrany indray toy ny solosaina hafa, fa lavitra ampy fijerena mampahazo aina amin'ny birao.
Ny fitendry sy ny lamba dia natao avy amin'ny fotsy magnésium firaka, izay manatrika ary mahatsapa tsara, fa marika tena mora. Araka ny fotoana fohy miaraka ny tena toetrany Book Voamariko aho scratches amin'ny underside ny fitendry sy ny marika eo amin'ny molotra na dia teo aza mijery rehefa tsara.
Rehefa mihidy, ny tsy miankina aforeto fisaka, fa izany dia manana banga momba ny rantsan ny sakany mamorona ny anja endriny izay tapers avy 22.8mm ny fotoana ny 13mm matevina.
Mampiditra ny takelaka ao amin'ny mifanohitra ho mora raisina famelabelarana lamba na noho ny fijerena horonan-tsary amin'ny sidina. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Processor: Intel Core I5 ​​na i7 (6faha taranaka)
Storage: 128, 256 na 512GB
Camera: 8MP aoriana, 5MP anoloan'ny-miatrika
Fifandraisana: Wifi, Bluetooth, USB 3.0, SD, Mini DisplayPort
Laptop lafiny: 232.1 X 312.3 X 22.8mm
Laptop lanja: 1.52 na 1.58Kg
Tablet lafiny: 220.2 X 312.3 X 7.7mm
Tablet lanja: 726h
Mifandray ny lamba fanakonana backwards ny solosaina findainy fototra mamela izany ho aforitra indray teo amin'ny fitendry, natao tao amin'ny zoro ho moramora kokoa ny soratra amin'ny penina. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Rehefa mety manantena, ny maha-Microsoft-nanao milina, ny tena toetrany Book mihazakazaka Windows 10, izay arguably ny tsara indrindra dikan-Windows hatramin'izao.
Ny rindrankajy dia tsy tena manana tweaks manokana na customisations ho ny tena toetrany Book izay tsy hita ao amin'ny Windows hafa 10 convertible.
Ny rafitra fandidiana dia sady voadio sy ny korontana eo amin'ny mitovy ampahany. Ny fomba tsara indrindra mba hilazana dia maoderina, overhauled mpampiasa interface tsara sosona mivantana ny taloha ihany-Windows.
mahazo manodidina, fandefasana fandaharana ary isan'andro raharaham-barotra miasa eto amin'ity sosona ambony ary tena tena mora ampiasaina sy ilaina. Fa rehefa mila manova zavatra lehibe, esory ny biraonao fandaharana ohatra, ianao hatao booted miverina ho any izany Control Panel Tadidiko avy amin'ny Windows 2000 – efa zara raha niova.
Tena mahery vaika, mazava ho azy, ary afaka mahazo izay ilainao vita, fa ny samy hafa izay indrindra ny Windows 10 sosona sy ny underworkings dia tena jarring. Fa ny uninitiated Miahiahy aho fa mety ho tena saro-takarina, indrindra raha toa ianao mampiasa ny rantsan amin'ny fotoana sy tampoka tsy maintsy tap amin'ny boaty kely.
Bebe kokoa ao amin'ny Windows 10 vakio ny:
Windows 10 famerenana - farany dikan-Windows mba ho ny tsara indrindra Microsoft mandrakizay
Misy zavatra roa ny manamarika fa ny tena toetrany Book. Ny voalohany dia Windows Hello, izay manaiky ny tavanao sy ny hazo anareo tsy misy tenimiafina, dia mahafinaritra ary miasa haingana toy ny solosaina dia afaka fanombohana.
Activating takelaka fomba tena manampy rehefa miezaka ny tap zavatra na mampiasa ny tena toetrany Boky ho toy ny takelaka.
Boky ambonin'ny manana tsara tarehy, avo vahaolana sy ny Pixel-mikitroka efijery lehibe fijerena izay manana fijery ary mitodika marani-tsaina, ambara-pahatratranao ny fampiharana izay tsy afaka mitsambikina mihoatra araka ny tokony ho. Raha izay no mitranga no farany manjavozavo mijery sary masina sy ny soratra – ny tena ratsy traikefa, izay rehetra fahita loatra amin'ny fampiasana ny Desktop Windows fandaharan'asa toy ny Evernote, mpamoaka lahatsoratra isan-karazany sy ny hafa lahatsoratra fandaharana.
Apps avy amin'ny Windows fivarotana tsy mijaly avy mitovy olana, fa matetika ry zareo tsy ho mahery vaika. Evernote Touch no ohatra tsara, saingy tsara kokoa noho ny miezaka ny handinika amin'ny manjavozavo mikorontana.
Boky ho etỳ ambonin'ny ny fitendry sy ny trackpad tsara indrindra. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Voalohany indrindra, ny tena toetrany Boky Windows no tsara indrindra hatramin'izay aho solosaina findainy nampiasa. fe-potoana. Tena mafy, manana tena tsara backlit fitendry, Tena lehibe trackpad, ampy ny seranan-tsambo ary izany hazavana somary amin'ny marina ny 1.5kg.
Windows sasany solosaina dia thinner, ny sasany dia maivana, nefa tsy misy manana tena toy ny tsara ny miaraka amin'ny efijery, Ohatra, hery sy ny orinasa famolavolana.
I niezaka hahazo miasa tsara izany andro izany amin'ny hery sy ny bateria mbola ampy ho kely ny mazava famakiana ny fiarandalamby an-trano miaraka amin'ny takelaka.
Tsara ny manamarika, na dia tsy manan-tsahala ny tena toetrany Book, fa afaka ny hikasika ny varavarana lamba ho fahan'ny dia tsara, na dia manao zavatra toy ny fitendrena mankaleo, ho toy ny fanalavirana ny kitondro manodidina dia haingana be dia be noho ny mampiasa ny trackpad.
Ny takelaka dia fahazavana ampy ny mihazona ny fotoana fohy tamin'ny tanana iray, fa dia tena lehibe. Ianao toa tsy mba niala an-trano fotsiny ny takelaka ampahany ny tena toetrany Book. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny takelaka dia natao tao amin'ny fitendry iray tena mihaja "fahatsiarovana tariby" Fanidiana rafitra, izay miova endrika rehefa misy amin'izao fotoana izao dia ampiharina manerana ny. Ny rafitra dia elektronika: maika ny bokotra eo amin'ny fitendry na kisary teo amin'ny efijery disengages ny takelaka.
Tsy maintsy misintona izany mivantana niakatra avy amin'ireo andaniny roa raha mihazona ny fitendry teo. Tsy toa mafy, fa tsy. Mifandray izany fotsiny ny raharaha ny plonking ny lamba fanakonana ny connectors. Ary mafy ny roa samy hafa avy hatrany.
Ny lamba dia azo apetraka na lalana manodidina ny Keyboard fototra, izany hoe toy ny solosaina na inverted, izany dia azo aforitra faingana tahaka ny natsangana kahie amin'ny latabatra na nijoro ho toy ny maneho.
Tsara ny manamarika fa ny takelaka ho tafasaraka ihany raha ny tena toetrany Book manam-pahefana, izany hoe raha maty ao an-tanana dia tsy misy reattaching izany na detaching izany handrehitra hanjakazaka ka hanidy azy io araka ny tokony ho.
Ny lamba Tena maranitra, amin'ny feh miaraka amin'ny iPad na Google Pixel C, raha ny 3:2 aspect tahan'ny dia midika fa ny habe ny ny A4 kely ny taratasy. Websites, Comics sy ny boky lehibe rehetra mijery. Manana roa anoloan'ny-miatrika mpiteny izay mafy sy mazava noho ny fijerena horonan-tsary, raha ny écouteur seranan-tsambo ao an-takelaka, tsy ny Keyboard.
Ny 13.5in lamba lehibe dia midika hoe ny be noho ny ankamaroan'ny Takelaka hafa sy amin'ny 726g izany ihany koa ny tsara tarehy mavesatra. Na dia eo aza ny maha-feno-blooded PC izany ihany no mbola 7.7mm matevina, izay tena tena miavaka. Izany no thinner noho ny ankamaroan'ny finday avo lenta.
Niezaka aho mba manodidina ny telo ora ny famakiana ny fiainana avy tao amin'ny takela-kazo eo mendrika mamirapiratra. Microsoft reckons dia haninjitra ny efatra ora ho an'ny lahatsary playback. Ary ny takelaka ho voampanga ihany koa dia afaka misaraka amin'ny fitendry, no tokony mila.
Ny lehibe indrindra ny PC hantsana lalina manjaka toy ny takelaka dia ny indray mipi-maso-ny toetry ny ankamaroan'ny takelaka hafa dia tsy tena toy ny indray mipi-maso ho an'ny Windows. Izany dia mety ho roa segondra raha ny nakatona ary tsy matory, izay manao araka ny fe-potoana napetraka.
Pen ho etỳ ambonin'ny mahatonga azy mora ny kisary tsotsotra avy hevitra amin'ny 12.5in efijery. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Microsoft ny penina no iray amin'ireo tsara indrindra eo amin'ny raharaham-barotra, amin'ny tsara ny lanjany sy ny habeny. Tsy magnetically antoky hatramin'ny ilany ny efijery, izay nijanona nataony rehefa hifindra aho manodidina, fa natao nandondòna eny ny kitapo.
manana 1,024 tahan'ny ny tsindry fahatsapana sy ny tena no mahatsiaro ho toy ny penina eo amin'ny taratasy. Ny nib hovaina koa raha tianao ny mafy kokoa na malefaka mihevitra.
Misy bokotra roa. Iray eo amin'ny lafiny asa toy ny Modifier fanalahidy ho an'ny paompy na mpitan-fihetsika. -Tampon'ny asa bokotra Toy ny gaoma, ary afaka ny mampihaino ny hanomboka fandaharana isan-karazany, na manao asa rehefa tokan-tena, or double press or a press and hold. By default it launches OneNote on a press, which allows you to draw on the screen in a second or so.
Fa raha oharina, Apple’s 13in MacBook Pro (just laptop) starts at £900, Dell’s XPS 12 2-in-1 starts at £899 and Asus’s convertible T300CHI £800.
The grey magnesium body looks and feels premium, with Microsoft’s shiny Windows logo on the back. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
A dock is available to turn it into a pseudo-desktop, with ethernet, USB, headphones and multiple mini DisplayPorts. Na izany aza, a monitor that worked fine when plugged directly into the Surface Book wouldn’t work when plugged into the dock.
Ny lamba lehibe, the hinge is interesting and the mechanism for detaching and re-attaching works very well.
saingy, as a tablet, the apps available for iOS or Android for offline media consumption or similar are missing, as are mobile games. It’s also very expensive – but for that money you get a powerful machine, with an excellent stylus and a work-ready battery.
Mahatsara: Ohatra tsara dia tsara, decent trackpad, brilliant screen, great stylus, 13-hour battery, fancy hinge, great 2-in-1 compromise, proper ports, Windows Hello
Maharatsy ny mifampiresaka: Windows has a tablet app gap, software bugs, lafo, tablet-only battery could be longer, heavy for a tablet, HiDPI mode fails for desktop apps, interface is a mess if you dig deep enough
Microsoft Surface Pro 3 famerenana: the most lappable tablet yet
Microsoft tena toetrany 3 famerenana: iray amin'ireo tsara indrindra solosaina findainy takelaka-grefy
Article, Computing, Gadgets, Solosaina, Microsoft, Microsoft tena toetrany, Famerenana, Samuel Gibbs, Tablet ordinatera, Teknolojia, Windows, Windows 10
← Farany indrindra Insane Teknolojia sy ny famoronana [VIDEO] Izao ny Hoavy ny Asa? →